Ahoana no fomba handanjana tombony? Automated forex robots and signals
Home » Ny fomba hivarotana tombontsoa amin'ny tsenam-bola
Ny fomba hivarotana tombontsoa amin'ny tsenam-bola
Ilaina ve ny manao varotra amin'ny Forex?
Moa ve sarobidy ny manao raharaham-barotra raha tsy misy lease, fifanarahana, fanaraha-maso, mpanjifa tsy afa-po? Angamba maro dia lavo amin'ny fifampiraharahana noho izany.
Ny tsena vola dia ambany noho ny tahiry amin'ny volavolan-dalàna, fa mora kokoa ny mivoaka. Tsy misy fifanarahana, haba, hameno sy hanaisotra ny vola araka izay tianao, terminale maimaim-poana, soritra midadasika ary, hany ka, marim-pototra. Afaka mahazo vola amin'ny fotoana iray na andro na alina ianao, na aiza na aiza manerana izao tontolo izao, na aiza na aiza, na dia mipetraka eo amin'ny asa lehibe aza.
Ilaina ve ny manao varotra amin'ny Forex? Ahoana no hanombohana?
1. Manorata amin'ny mpampindram-bola azo antoka. Manoro hevitra anao izahay Pepperstone.
2. Manao dingana fototra: inona ny Forex, inona no tsy mitovy amin'ny tsena hafa, fanadihadiana ara-teknika, fanadihadiana fototra, voambolana, taratra, sehatra, fitantanana vola, paikady varotra.
3. Manokàna kaonty Demo aty am-piandohana ary andramo ny zava-drehetra eo amin'ny fampiharana. Ny olona tsirairay dia haka fotoana samihafa mba hifankafantarana amin'ny programa, baiko ary hafa. Aza milalao ao amin'ny kaonty virtoaly, manana tanana ianao ary mandroso mankany amin'ny varotra tena izy.
4. Manomboka varotra miaraka amin'ny tahan'ny 0.01 farafahakeliny amin'ny kaonty mivantana. Mba hanaovana izany, dia mila mameno ny kaontinao ianao amin'ny 100-300 dollars.
5. Ny rehetra, nanomboka niasa tao amin'ny tsena fifanakalozana vahiny ianao. Raha mifarana volana isam-bolana ianao, dia mandehana any amin'ny ambaratonga lehibe kokoa.
Ny varotra amin'ny Forex dia asa goavana, ary indrindra indrindra eo amin'ny tena. Haka fotoana sy vola be izany. Mifantoha amin'ny varotra eny an-tsena, aza matahotra ny hanao fahadisoana, ataovy hadisoana, mianatra avy amin'ny fahadisoanao. Mamolavola ny drafitr'asa momba ny varotra ary araho tanteraka izany. Tadidio - tsy azo fialana ny fahavoazana, raiso ho toy ny mahazatra.
Fanaovana varotra na miaraka amin'ny fanampian'ny robots?
Ny varotra manual dia mifototra amin'ny fahaiza-manaon'ny mpivarotra. Mba hahalalanao ny fomba faminanianao ny tsena sy ny fomba hivarotana tombom-barotra, dia mila taona maro. Ny mpivarotra mandany fotoana be dia be amin'ny fampandrosoana mifototra amin'ny fomba isan-karazany amin'ny varotra. Mifidy ny iray izy ireo izay mitondra vokatra miorina amin'ny ankapobeny, ary ny varotra amin'ny alalan'ny broker, ny terminal, ary mandinika ny sarisary amin'ny sainy, manokatra sy mamarana ny toerana misy ny tanany.
Saingy tsy ny olon-drehetra no te-handany fotoana hianarana matihanina sarotra vaovao, hanara-maso ny fanovana sy ny vaovao amin'ny andro, hanaovana fandinihana fototra sy teknika momba ny fandaharam-potoana, sns. Noho izany dia manolotra tetikady ara-barotra maoderina isika miaraka amin'ny tetikady efa natsangana efa natsangana. Ny robot dia hanokatra sy hampifanaraka ny fifanakalozan-kevitra amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao isan-karazany any am-piasana, hametra ny fihenan-dàlana sy ny tombom-barotra, amin'ny teny iray ho an'ny varotra ary hahazoana tombony raha manao ny raharahanao manokana ianao.
Ohatrinona ny azoko andehanana?
Azonao atao ny miditra amin'ny tsena Forex miaraka amin'ny dolara amerikana amin'ny kaonty cent. Fa inona ilay teboka?
Ny kaonty Standard dia mitaky ny $ 100, EСN - fara-fahakeliny $ 300.
Raha te hiaina miaraka amin'ny vola miditra amin'ny tsena ianao, raha toa ka manana tetikady mahasoa mahomby ianao ary mivarotra tànana, mila $ 10,000- $ 20000 ianao.
Te-hividy an-tapitrisa, varotra iray tapitrisa. Te-hahazo an'arivony ianao - varotra an'arivony. Ary raha manangom-bola ianao ...
izahay Hyberpack v8.3. robots forex ho an'ny varotra maoderina, ny tahan'ny kely indrindra takiana dia $ 800. Ho an'ity tahirin-kevitra ity dia ny 25% fotsiny no voalohany indrindra, ary ny tombom-barotra azo antoka dia tokony ho 50% isam-bolana, ary mandritra ny fe-potoana sasany, dia mety hahatratra 100%.
Amin'ny firy no tsara kokoa ny rahona?
Izany rehetra izany dia miankina amin'ny karazana varotra fidinao (lalàmpanorenana, toerana, sns.). Raha maka fe-potoana 5-30 minitra ianao, dia manolo-tena ny hivarotan-dronono mandritra ny hetsika Eoropeana sy ny ampahany voalohany amin'ny fivoriana Amerikana (10.00-20.00 MSK). Ny fifanakalozana toy izany dia mety ho an'ny olona malalaka tanteraka izay tsy mandray anjara amin'ny fianarana / asa.
Saingy raha olona be atao ianao dia afaka mametraka iray amin'ireo robot automatique ho an'ity karazana varotra ity:
- Keltner channel autotrading robot forex, - M15
- Ny robot ara-toekarena mifototra amin'ny ATR sy ny fampitomboana ny isa - M30
- Forex robot miorina amin'ny paikady scalping (scalper) - M5.
- Golden Bull forex robot (scalper) - M5.
Ny ora ao amin'ny ora ora (H1) dia tsy dia miankina amin'ny fivoriana ara-barotra, ary afaka manakalo ny mari-pamantarana voaray amin'ny fotoana rehetra. Zavatra hafa - azonao jerena amin'ny 3 amin'ny maraina? Ny matory dia mety hahaliana, noho izany dia amin'ny sehatry ny varotra sasantsasany amin'ireo famantarana izay tokony hohadinoina.
Ho an'ity karazana varotra ity dia ireto manaraka ireto:
- Ny robot ara-toetr'andro mifototra amin'ny rafitra fiatoana sy fananganana (SAR)
- Forex robot miorina amin'ny andro iraisam-barotra manomboka varotra sy ADX indicator
- Mpanolo-tsaina manam-pahaizana miorina amin'ny famantarana CCI
Manoro ihany koa ny EA ho an'ny mpivady maro "Belkaglazer EA", "Fox scalper", "Gegatrade EA".
Raha olona afaka maimaim-poana ianao ary manana fotoana betsaka hipetrahana mandritra ny tontolo andro eo anoloan'ny monitor ianao, manana faharetana sy faharetana ampy hahazoana labozia dimy minitra, manana traikefa ampy ianao ary manana fahalalana ara-bola sy matematika Ny famakafakana ara-teknika isan'andro momba ny mari-pankasitrahana lehibe indrindra, dia olona sasantsasany mandanjalanja sy mahay mandanjalanja izay manaraka tsara ny tetik'ady novolavolainy - avy eo ny varotra tanana dia natao ho anao ary afaka varotra amin'ny forex profitable! Mianara ary mahasoa.
Fa raha manana asa fototra ianao ary te-hampitombo ny fidiranao amin'ny tsy fisian'ny loza manokana, dia tsy manam-potoana hikaroka paikady ianao ary hianatra ny fitaovana rehetra amin'ny varotra, tsy manana ny vola fanampiny ho an'ny fitsapana sy ny fahadisoana, vizana mandray risika sy ny fatiantoka - ny varotra miaraka amin'ny fanampian'ny robots novokarin'ireo matianina. Manana tetikady efa vita izy ireo izay mifototra amin'ny famantarana isan-karazany izay atolotra ireo indostrialy mifototra amin'ny fandalinana tanteraka ny hetsiky ny ankamaroan'ny vola amin'ny taona 2-3. Ny mpanolotsaina dia hivarotra an-tsokosoko. Mila mividy robot toy izany ianao, mametraka izany ao amin'ny anao Metatrader 4 ary jereo ny fitomboan'ny fametrahanao.
Vintana tsara, ary varotra mahomby!